Kooxda Juventus Oo Isha Ku Heysa Inay U Dhaqaaqdo Ciyaaryahanka Khadka Dhexe Ee Hal Abuurka Leh Ee Chelsea
HomeSuuqa kala iibsigaKooxda Juventus oo isha ku heysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee hal abuurka leh ee Chelsea
Ciyaaryahanka tayada leh ee khadka dhexe ee Chelsea Billy Gilmour ayaa lagu soo waramayaa inuu si lama filaan ah diirada ugu saaran yahay kooxda heysata horyaalka Serie A ee Juventus.
Ka dib markii uu ka soo kabsaday dhaawac jilibka ah oo uu qabay xagaaygii hore, 19 jirkaan ayaa ciyaaray kulankiisii ​​ugu horeeyay ee xilli ciyaareedkan kulankii Sevilla habeenkii talaadada.
Marka la fiiriyo taam ahaanshihiisa isbuucyada soo socda, xiddiga reer Scotland ayaa la filayaa inuu si joogta ah uga ciyaaro kooxda Frank Lampard.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Calciomercato, kooxda reer Talyaani ayaa laga yaabaa inay dalab macquul ah ka gudbiso Gilmour inta lagu jiro daaqadda Janaayo.
Chelsea uma badna inay tixgeliso dalab kasta oo ku aadan rajadan, kaasoo lix kulan ku soo bilaabay kooxda Frank Lampard iyo lix bedel oo uu ku soo galay tan iyo markii tababaraha reer England loo magacaabay kooxda Blues.
Gilmour wuxuu heshiis kula jooga Stamford Bridge ilaa 2023.
Dhanka kale, ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Chelsea Callum Hudson-Odoi ayaa lagu soo waramayaa in loo ogolaan karo inuu ka tago Stamford Bridge amaah markii uu dib u furmayo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
20 jirkaan ayaa seddex jeer shabaqa soo taabtay 12 kulan oo uu u ciyaaray kooxda ka dhisan Galbeedka London, si kastaba ha ahaatee, waxaa ku adkaatay inuu boos joogto ah ka helo Premier League.